वडाबाट एक लाखभन्दा बढी प्रतिनिधि चयन हुँदै - Sankalpa Khabar
5. कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन : सभापति देउवा र नेता सिटौला एकठाउँ !
6. नेपालमा पहिलो पटक आउँदै मोर्डना खोप
३० भाद्र ०८:१२
काठमाडौं। देशभरका सबै वडामा नेपाली काँग्रेसको अधिवेशन प्रक्रिया पूरा हुँदा एक लाख १० हजारभन्दा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने भएका छन् ।
काँग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामा अधिवेशन पूरा हुँदा त्यहाँबाट १ लाख १० हजारभन्दा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने जनाएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले वडाको निर्वाचनबाट पार्टीको वडाध्यक्ष र क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने र त्यसबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने जानकारी दिए ।
काँग्रेसको विधानअनुसार १५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडाबाट १५ क्षेत्रीय प्रतिनिधि र एक वडा सभापति गरी १६ जना चयन हुने छन् । वडा सभापतिले पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिसरह महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने प्रावधान छ । वडा अधिवेशनले वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने छ।
कुनै एउटा वडामा १५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको हकमा भने प्रतिएक सय क्रियाशील सदस्यता बढ्दा १० क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढ्ने छन् । यस पटक काँग्रेसले अहिलेसम्म एउटा वडामा बढीमा सात सय जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिएको छ ।
न्यूूनतम भने १५० वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भए पनि वडाबाट एक सभापति र १५ क्षेत्रीय प्रतिनिधि गरी जम्मा १६ जना नै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनेछ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधिको निर्वाचन गराउनुपर्ने छ ।
समितिका सदस्य अधिवक्ता केसीले सबै वडाको अधिवेशन पूरा हुँदा कति क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् भन्ने विवरण भने अहिले तयार हुन नसकेको जानकारी दिए । त्यसका लागि सबै वडाको अधिवेशन प्रक्रिया सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।
काँग्रेसले अहिलेसम्म ५७ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ भने २० जिल्लाको सदस्यता सूची सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै चयन हुने छन् । यसका साथै जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा समेत क्षेत्रीय प्रतिनिधि मतदाता हुन् ।
यो समाचार गोराखापत्र दैनिकबाट
मुख्यमन्त्री शाहीले मागे विश्वासको मत
१२ मंसिर ०७:३४
लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि युवाको पक्षमा, लिङ्देनलाई सहयोग गर्न कमल…
१५ मंसिर १४:२९
नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र ल्याउन गुप्त रुपमा अभियान…
११ मंसिर १६:३१
११ मंसिर १४:२८
कांग्रेस बागलुङ सभापतिमा शेरचन
१५ मंसिर १३:१३
आज बालाचतुर्दशी- पशुपतिमा शतबीज छर्न आए लाखौँ भक्तजन
१७ मंसिर ०७:०१